Iindaba -Ubhubhane weCovid-19 ngo-2020 unefuthe elikhulu kubomi babantu
Ubhubhane weCovid-19 ngo-2020 unefuthe elikhulu kubomi babantu
Ubhubhane weCovid-19 ngo-2020 unefuthe elikhulu kubomi babantu. Kwangelo xesha, ubhubhane ubuye wazisa nefuthe elithile kubume bempilo yomhlaba. Utshintsho olutsha lubonisa ukuba ezemidlalo ezisebenzayo, ukomelela kwi-Intanethi, kunye neendidi zokomelela ekhaya konke kushushu. Kule meko, uluntu luneemfuno eziphezulu kwizixhobo zomzimba. Amandla okuphucula ishishini lokuqina kwithuba lasemva kwendyikityha enkulu kakhulu. Ikhaya / ukomelela kwangaphakathi kuye kwaba yinto ekhulayo yamanye amazwe.
Ukomelela kuzwelonke kunyukele kwisicwangciso-qhinga sesizwe. Amazwe amaninzi sele eqalile ukugxila ekuxhaseni icandelo lezemidlalo. Ke ngoko, ishishini lokuqina lomzimba lingenise ixesha lokukhula kwegolide.
Ukuthobela imeko yophuhliso lwamashishini, i-AOYUZOE iya kuhlangabezana neemfuno ezintsha zemidlalo yoluntu kunye nokuba sempilweni.
Kukhuphiswano lokuqina kwekhaya kunye nokuqina kwangaphakathi, u-AOYUZOE ukwakhokele ekugqibeni ubeko exhomekeke kwizibonelelo zalo-kukhutshwa ibhayisekile ejikelezayo yangaphakathi, amanzi kunye nomatshini wokurhola umoya, Tsala iBar, umpu wokuphulula, kunye nezinye izinto ezininzi ezisebenzayo. izixhobo zomzimba.
Kwakhona, u-AOYUZOE uqalile ukuphuhlisa ishishini lokuqina komzimba kwi-Intanethi kulo nyaka. Ngokuphindaphinda kunye nokuphucula izixhobo zekhompyuter kunye nesoftware, sinika abasebenzisi izisombululo ezingcono zomzimba, ukuze bonwabele ukonwaba kwemithambo ekhaya.
I-Qingdao AllUniverse Machinery Co, Ltd., njengeshishini lezeshishini lokuqina komzimba eTshayina, sikulungele ukubamba imeko entsha yophuhliso, sandise izinto ezintsha zesayensi kunye nezobuchwephesha, sizabalazela ukuphucula umgangatho wemveliso, ukomeleza uphando oluzimeleyo kunye nezakhono zophuhliso, ukomeleza emva kokuthengisa inkonzo, yenza uphawu lwethu, Yandisa ukuthunyelwa kwemveliso kwamanye amazwe, sisondele kwiimpawu ezaziwayo zamazwe aphesheya, ukuqinisekisa ukuba ukuma okungenakoyiswa kwimeko entsha.
Umpu omncinci wokuphulula, Umpu Wokuphulula, Ukujikeleza ibhayisekile, Ukuphulula umpu 30 isantya, I-Iron Gym Tsala ibha, Ukuzivocavoca ngebhayisikile ejikelezayo,